Inona ireo fitaovana azo ampiasaina hanatanterahana ny fikarohana asa soratra Amazon?
Ny fikarohana teny fikarohana dia dingana manan-danja amin'ny fampielezan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny fikarohana Amazon. Ny fidiran'ny ordinateranao azonao atao dia ny manatsara ny fidiranao sy manatsara ny toeranao.
Azo inoana fa nahita loharanom-baovao azo antoka momba ny vokatra ianao, izay ahitana ny fampahalalam-baovao tsy misy dikany amin'ny teny Amazon. Na izany aza, mila miaiky isika fa ireo vokatra ireo dia manana laharana ambony amin'ny pejy am-pikarohana Amazon. Mety hanontany tena ianao hoe nahoana ny mpampiasa dia miantso ireo lohateny lava be sy mividy ireo vokatra ireo - telepropter. Raha ny tena izy, ny mpampiasa dia tsy mahazatra loatra ny lohateny toy izany, fa ny algorithm an'i Amazon dia mahita azy ireo fa manan-danja sy mamaritra. Izany no antony ahafahanao miatrika lohateny toy izao ao amin'ny pejy TOP-Amazona TOP Amazon. Ireo mpivarotra an-tserasera mampiasa ireo lohateny lava ireo dia mahafantatra ny algorithm Amazon Amazon. Mba hananganana lohateny tsara azo an-dalam-pivoarana an-tserasera dia manatontosa fikarohana teny fototra mba hamantarana ny teny fikarohana izay tiany hokarohina. Miaraka amin'ny fitaovana fikarohana manan-danja amazonin'ny Amazon, dia mamaritra ny habetsaky ny fikarohana ny teny fanalahidy mety izy ireo ary mampiova ireo fiovana mety amin'ny Product Title, Description, Bullet Points, Fanontaniana mahaliana, Feedback, ary sary.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fitaovana azonao ampiasaina mba hahitana ny teny fikarohana indrindra amin'ny vokatrao, ary ny fomba hanampiana anao hampitombo ny isa sy ny varotrao. Noho izany, andeha isika hijery akaiky ireo fitaovana matihanina sy ireo paikady mahomby hitady ny teny fanalahidy mety ho an'ny orinasanao an-tserasera.
dia misy amin'ireo mpihaino marobe. Mahazo maimaimpoana sy mahafa-po. Ankoatra izany dia manome ny marina indrindra amin'ny angon-drakitra. Ity fitaovana ity dia afaka manampy anao hanombantombanana volavolan-dahatsoratra iray ho an'ny teny fanalahidy sy fehezanteny manan-danja. Ankoatra izany, manome anao fahafahana hahita andian-teny hafa mifandraika amin'izany. Google isaky ny minitra no manangona angona angon-drakitra, izany no mahatonga ny Google Keyword Planner izay ahafahanao mahazo antontan'isa marobe momba ny fikarohana amin'ny alalan'ny tenimiafina na fehezanteny nomena. Azonao atao ny mampitombo ny fikarohanao amin'ny sehatra jeografia sy ny mpihaino (taona, lahy sy vavy, sns. ). Tena manampy tokoa raha te hampiroborobo ny vokatrao amin'ny Amazon na sehatra varotra hafa ianao.
Mba hanombohana ny Google Keyword Planner, mila mamorona kaonty AdWords maimaim-poana ianao. Raha vao manana ny kaontinao ianao, dia hahita ny Planeta Keyword eo ambanin'ny tabilao Tools. Azonao atao ny manomboka ny fikarohana miaraka amin'ireo teny fototra fototra ary mihodina tsikelikely amin'ny teny filamatra misimisy kokoa izay hitadiavan'ny mpampiasa. Mba hanatontosana io asa io dia mila manokatra "Fikarohana vaovao maimaim-poana ianao ary mahazo ny antonta volan'ny fikarohana" ary ampidiro ao amin'ny "Ny vokatrao na ny serivisinao". Farany, tsindrio ny bokotra "Get ideas". Vokatr'izany dia hahita lisitry ny teny fanalahidy mifandraika amin'izany ianao. Na izany aza, mila mametraka antoka ianao fa hikaroka hevitra amin'ny Keyword, fa tsy amin'ny hevitra Adgroup.
Ny Google Keyword Planer dia hanome anao ny fikarohana isam-bolana ho an'ny teny fanalahidy mifandraika amin'izany. Ny habetsahan'ny fikarohana ao amin'ny Amazon dia mety tsy mitovy amin'ny angona azonao amin'ny GKP. Na dia izany aza, ireo tahirin-kevitra ireo dia mitovy ihany, izay manampy anao hamantatra ny dikanteny izay hahatonga anao ho ny fifamoivoizana indrindra amin'ny Amazon.
Famaritana antsipirihany momba ireo fikarohana hafa momba ny fikarohana Amazon izay azonao jerena ao amin'ny Pejy Fanontaniana sy Valiny .